Gunaanadka shirka Soomaaliya ee London - BBC Somali - Warar
Gunaanadka shirka Soomaaliya ee London
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 7 Mey, 2013, 14:07 GMT 17:07 SGA
Madaxwaynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaaraha Britain, David Cameron, ayaa goor dhow saxaafadda ka horjeedin doona war murtiyeedka Shirka London.
Shirka oo saaka subaxnimadii furmay, ayaa waxaa qudbado ka soo jeediyay Ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron iyo madaxwaynaha Soomaaliya.
Madaxda gobolka oo dhan ayaa hadalo ka jeediyay furitaankii shirka.
Ergooyin ka socda in ka badan konton dal iyo ururo caalami ah ayaa ka qaybgalaya shirka.
Ra'iisul wasaare David Cameron, ayaa intaa ku daray in dowladda Soomaaliya ay horumar ka samaysay dhinaca Daah-furnaanta iyo xisaabtanka.
Si looga hortago buu yiri, ra'iisul wasaare David Cameron, barkac ballaaran iyo dhoofinta argagixisada.
Madaxwaynaha ayaa sheegay in Soomaaliya u baahan tahay in la taageero, loo baahan yahay caawinaad iyo maalgalin iyo in laga ilaaliyo kuwa isku dayaya ayuu yiri in ay na burburiyaan.
Madaxwayne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa Somalia kala meel dhigay geed uu ka beeray gudaha Villa Soomaaliya oo u baahan in waraabiyo, oo la quudiyo isla markaana laga ilaaliyo xoolaha.
Madaxwaynaha ayaa xusay in Soomaaliya ay dalbanaynso waxqabad hagar la'aan ah, iskaashi iyo taageero.
Madaxwaynaha ayaa sheegay in xasiloonida Soomaaliya ay hadda muhiim ugu tahay mustaqbalka dalka, amniga gobolka iyo dunida inteeda kale iyo sidii burcad-badeednimada looga xorayn lahaa goobaha ay ku xoog badan yihiin ee Gacanka cadmeed.
Dibadbaxayaasha oo isku darka gaaraya ilaa 300 oo qof ayaa kala mataya mucaaradka Djibouti, Khatumo State iyo taageerayaasha shirka maamul u samaynta Kismaayo.
Arrimaha shirkan diiradda lagu saarayo waxaa ugu weyn sidii taageero dhaqaale loogu heli lahaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya si wax uga qabto dhibaatooyinka xagga ammaanka, dhaqaalaha, caddaaladda.
Waxaa lagu wadaa in taageero niyadeed iyo mid dhaqaale loogu helo dowladda Soomaaliya loogu helo si ay wax uga qabato arrimaha amniga, cadaaladda, isla markaana u hesho dhaqaale.